Kobe Bryant oo geeriyooday | Caasimada Online
Home Dunida Kobe Bryant oo geeriyooday
Kobe Bryant oo geeriyooday
Los Angeles (Caasimada Online) – Rugcadaaga kubadda kolyaga ka fariistay ee Mareykanka, Kobe Bryant, oo 5 jeer horaalka NBA kula guuleystay kooxda Los Angeles Lakers, ayaa Axadda ku geeriyooday diyaarad helicopter ah oo ku dhacday gobolka California.
Afar qof oo kale oo Kobe la saarnaa, oo mid ay tahay gabadhiisa Gianna Bryant oo 13 jir ahayd, ayaa sidoo kale ku dhintay helicopter-ka oo ku burburtay magaalada Calabasas oo dhinaca waqooyiga galbeed ka xigta magaalada Los Angeles. Cidna kama bad-baadin diyaaradda dhacday.
Kooxaha gurmadka deg degga ah ayaa ku cararay goobta ay helicopter-ka ku dhacday, ayaga oo baahiyey muuqaallo muujinaya helicopter-ka oo holcaysa.
Hay’adda duulista rayidka Mareykanka ee FAA ayaa nooca helicopter-ka dhacday ku magacowdy Sikorsky S-76, waxayna sheegeen inay baaritaan ku sameyn doonaan.
Bryant ayaa shan jeer horyalaka NBA kula guuleystay kooxda Los Angeles Lakers, waxaana 18 jeer uu ka mid noqday xiddigaha xulka NBA-da ee loo yaqaan All-Star, muddadii 20-ka sano ahayd ee uu cayaarayey.
Waxa uu ahaa ninka saddexaad ee ugu dhibco dhaliska badan horyaalka NBA, isaga oo dhaliyey 33,643 dhibcood, waxayna ahayd xalay un markii Lebron James uu dhaafay Kobe, isaga oo galay kaalinta labaad.
Kobe iyo xaaskiisa Venessa ayaa dhalay afar gabdhood oo lagu kala magacaabo Gianna, Natalia, Bianca iyo Capri, oo dhalatay bishii June 2019.